हाँडीगाउँको तन्त्र साधना र दरवार हत्याकाण्ड – Kantipur Hotline
हाँडीगाउँको तन्त्र साधना र दरवार हत्याकाण्ड
जारको समयमा रास पुटिन रसियाका नामी तन्त्रविद थिए । उनले तत्कालीन ‘नोबल फेमिली’लाई पक्षघात भएको व्यक्ति जुरुक्क उठेर हिड्थ्यो । रेलमा थरथर हात कामेर यात्रा गरेका व्यक्तिलाई गिलास समात् भन्दा उ गिलास समातेर उठ्थ्यो । रास पुटिनप्रति महारानीको लग्गूपन, रास पुटिनले राज्य पल्टाउन लाग्यो भनेर तीन जर्नेलले रासपुटिनलाई विष खुवाए, गोली बर्साए, तैपनि रासपुटिन मरेनन् । अन्तमा, आगोमाथि घोप्टिन पुगेपछि रासपुटिनको अन्त्य हुनपुग्यो । अर्थात पावर अफ माइण्ड सर्वश्रेष्ठ हो । शरीर केही होइन, डो-याउने आत्मा हो । अरुको आत्मा वा चेतलाई एकाग्र पारेर, निर्देशित गरेर आफ्नो उद्देश्यमा सशक्ती पारेर लाने एकाग्र विद्या, प्रविधि । यही प्रविधिलाई पूर्वीय दर्शनको तन्त्र भन्दा हुन्छ ।
हुन त महाभारतमा भीष्मको इच्छामृत्यु, तीरको शैयामा लम्पसार पर्दा पनि नदुख्नु भनेको ‘सेन्टर अफ सेन्सलाई ट्रान्सफर’ गर्न सक्नुले हो । क्राइष्टलाई किला ठोकेर झुण्ड्याउँदा क्राइष्टले कुनै चित्कार नगर्नु पनि यही हो । हिटलरको डिक्टेटिङ् पावर, नेपोलियनको चमत्कार, गान्धीको सत्याग्रह–बन्दे मातरम, महेन्द्रको …….जंगी निशान हाम्रो, यी यस्ता आवाज थिए जसले अरुको ध्यान खिच्न सफल थियो, सुन्नेलाई एकाग्र पारेको थियो, यसलाई ‘पोलिटिकल हिप्नोटिज्म’ भन्न सकिन्छ । तन्त्र के हो भन्ने बिषय समुद्र मन्थनजस्तै व्यापक छ भन्दै एक तन्त्रका साधकले बताए– तन्त्र विज्ञान हो । तन्त्रको स्रोत भौतिकवाद, पञ्च इन्द्रीयको विकासमा आधारित प्राचीन हिन्दू धर्मको जीवन पद्धति हो । तन–मन–आत्माको जराबाट उत्पत्ति भएको पद्धति हो यो । जसरी स्वीच थिचेपछि बत्ती बल्छ, करेन्ट देखिन्न । बत्ती बल्नु ‘रिफ्लेक्शन’मात्र हो । शक्ति अति सुक्ष्म छ । त्यस्तै मानसिक चेतना, भौतिक शरीर, अध्यात्म –आत्मशक्तिको समीश्रणबाट नयाँ शक्ति निस्कन्छ, त्यही हो तन्त्र । अर्थात मानसिक, अध्यात्मिक र भौतिक स्रोतको सन्तुलन शक्तिमा परिणत हुनु तन्त्र हो । अर्का एक तान्त्रिक भन्छन्– देवघाटको त्रिवेणी । तीन नदीको पानी, पानीको करेन्ट । एउटा यस्तो विन्दू, केन्द्रमा निश्चल हुन्छ, त्यो केन्द्रलाई समाधिको केन्द्रविन्दू मानिन्छ । त्यहा“ कुनै ‘फोर्स’को प्रभाव हुन्न । बुद्धको निर्वाणको विन्दू पनि त्यही हो । तन्त्रको विन्दू पनि त्यही । भौतिकवाद र अध्यात्मबादको फ्यूजनको केन्द्रविन्दू तन्त्र हो । मन्दिरका टुँडालहरु कलात्मक तन्त्र हुन्, कतिपय ठाउँमा तामस कलाकृतिमा तन्त्रका अनेकन आकृतिहरु अङ्कित देखिन्छन् ।
हिजोका दिनमा आणविक अस्त्र थिएनन्, हिप्नोटिज्म र तन्त्र, मन्त्रबाट शक्ति आर्जन गरिन्थ्यो । तन्त्र अदृश्य अस्त्रका रुपमा विकसित भएको देखिन्छ । टुनामुना, कुण्डलिनी जगाउने, पूर्वजन्मका आख्यानहरु, आखेट हेर्ने, जोखना हेर्ने, जन्मकुण्डली, ग्रहदशा, मोहनी लगाउने, भूत भगाउने, केही लाग्यो भनेर पन्छाउने, झारफुक, क्षेत्रपाल, नाग लाग्यो वा देवी देउता रिसाए भनेर पूजा गर्ने, कूल देउता, मूल देउता खुशी पार्ने, नाडी हेर्ने, धामी–झाँक्रीको प्रयोग, ग्रह दशा मोचन वा मठ–मन्दिरको स्थापना, जात्रा, स्थानान्तरण वा पूजा गर्दा तन्त्र, मन्त्रबाट मात्र गर्ने यी सबै साधन साध्यका रुपमा विकसित भएर आएका देखिन्छन् । इन्द्रजाल, ब्रम्हजाल, नागपासजस्ता प्रविधि पनि तन्त्रमन्त्रकै विधिबिधान हुन् । तन्त्र हतियार हो । मानसिक शक्तिमा एकाग्रता उत्पन्न गराएर, प्रभाव पारेर उसलाई आफ्नो अभिष्ठमा उत्प्रेरित गर्ने र अर्को स्थिति उत्पन्न गराउने शस्त्रको नाम तन्त्र हो । तन्त्र सकारात्मक र नकारात्मक दुईथरि हुन्छन् । स्वार्थपूर्ति गर्ने तन्त्रलाई कालतन्त्र भनिन्छ । यो असूरहरुले स्वार्थपूर्तिका लागि बिनासकारी रुपमा प्रयोग गर्ने गर्छन् । अर्को स्वेततन्त्र छ, यो पवित्र तन्त्र हो । यसले शुद्धिकरणको माध्यमबाट उच्चकोटीको उच्चाटनतिर उन्मुख गराउ“छ । स्वेततन्त्र निर्माण हो भने कालतन्त्र ध्वम्सात्मक हुनेगर्छ । तन्त्रको काम अरु आत्मालाई दमन गर्ने र आफ्नो आत्मामा बशीकरण गर्नका लागि प्रयोग गरिने अदृश्य शक्तिशाली हतियार हो । मन्त्र जपेपछि तन्त्रको प्रभाव सुरु हुन्छ । तन्त्र–आणविक हतियारजस्तै बिनासक हुन्छ ।
कालतन्त्रका अनेक रुप छन्– अपराधतन्त्र, दानवतन्त्र, द्वेषतन्त्र, बशीकरणतन्त्र, मोहनी तन्त्र, एकाग्रतन्त्र आदि । यी तन्त्रशक्ति आर्जन गर्नेहरुले अनेकथरि साधना गरेका हुन्छन् । मसान सिद्धि, अष्ठसिद्धी आदि । सबैभन्दा कडा सिद्धि भैरवीतन्त्र मानिन्छ । मसानघाटमा महिलाको लासमाथि संभोगरत साधनाबाट प्राप्त हुने तन्त्रशिद्धि बढी प्रभावशाली मानिन्छ । कालतन्त्रको जड भनेको षडयन्त्र हो । यो तन्त्र खासगरी हिन्दू बाहुल्य भएको भारत र नेपालमा व्यापक रुपमा अस्तित्वमा छ । विश्वकै सबैभन्दा ठूलो लोकतन्त्र भनेर दावी गर्ने भारतमा दिगम्बर बाबा, लकडबाबा, अघोरी बाबा, नागाबाबा, धीरेन्द्र ब्रम्हर्षी, चन्द्रास्वामी, सिद्ध, जयन्द्र सरस्वतीलगायत, तान्त्रिकहरु राजनीतिका अदृश्य केन्द्रशक्तिका रुपमा स्थापित रहेका छन् ।
भारतको इतिहासमा निर्वस्त्र बस्ने दिगम्बर जैन र रुखमा मचान बनाएर खुट्टा खसालेर बस्ने लक्कडबाबाको आश्रममा कुनै बेला इन्दिरा गान्धी बिना संकोच आशीर्वाद लिन पुग्थिन् । चन्द्रा स्वामीले त राजीव गान्धी कालमा बोफोर्स काण्ड नै मच्चाई दिए । नेपाली राजनीतिका अति महत्वाकांक्षीद्वय प्रचण्ड र सुजाताको गुरु चरण सेवा र माघ २९, २०६६ को महिष पुजन (हिमाल) यस्तै प्रसङ्ग हुन् । हिन्दू होम, यज्ञादि, तन्त्र र साधनाको प्रभाव मुस्लिम देश पाकिस्तानमा पनि परेको देखिन्छ । पाकिस्तानी राष्ट्रपतिले प्रत्येक दिन कालो बोको ‘कुर्वान’ गरेको समाचार प्रकाशमा आएको छ । योग साधनालाई माध्यम बनाएर एकाग्र पार्ने प्रविधि चम्काएर आधुनिक कालका नयाँ बाबा निस्किएका छन्– बाबा रामदेव । उनीमाथि पनि ‘रामबुटी’मा मान्छेको हाडखोड मिसाएको आक्षेप लागेको छ । अर्का महापुरुष साई बाबा समाजकल्याणको माध्यमबाट सबै धर्म र सबै बर्गमा ‘भगवान साई’ बनेर छाएका छन् । साइबाबाको खालीहातबाट निस्कने बिगुत कुनै तान्त्रिक शिद्धि हुनुपर्छ ।
मन्दिरै मन्दिरको देश नेपालमा तन्त्र जनजीवनमा व्याप्त छ । बच्चा जन्मेदेखि मरेपछि पनि तन्त्र र मन्त्रको चौघेरामा उसको अस्तित्व र आत्मा घुमिरहेको हुन्छ । नेपाल धर्म भूमि हो, यो भूमिमा मायाजाल छ, महाविद्या र पञ्चाङ्ग पनि चलकै छ । यहाँ आत्मा, परमात्मा र पुनर्जन्मको विश्वास पनि कायमै छ । पाठपूजा, स्वस्तीशान्ति, द्वीप प्रज्ज्वलन, कुमारी पूजा, स्वेत–कालभैरव, अनेक जात्रा चलिरहेकै छन् ।
गणेशले दूध खाएको र दोलखा भीमसेनलाई पसीना आउँदा उपद्रो हुने विश्वास, क्षमा पूजा पनि चलिरहेकै छन् । सर्वआध्या रामेश्वरी तुलजा भवानीले कुनै बेला राजास“ग प्रत्यक्ष पासा खेलेका प्रसङ्गदेखि यो राज्य तिनै तुलजा भवानीको कटकिञ्जारी हो भन्ने विश्वास पनि बुढा पुरानाहरु भन्दैछन् । यो यही धर्ती हो, बाबु मारेर राजा बनेका राम शाहले तन्त्रकै बलमा न्यायका उदाहरण बन्न सफल भए भने काका मारेका नीरशमशेर आज पनि सम्मानित छन् । प्रताप मल्ल, लक्ष्मीनर्सिङ् मल्लको युग तन्त्रमन्त्रले भरिपूर्ण थियो । तन्त्रकै बलमा ज्यान मारेका व्यक्तिको शासनलाई स्वर्ण युग मानियो । पृथ्वीनारायण शाहका भाई सिंहप्रताप शाहले काठमाडौंकी महिलाको यौनाङ्गमा तन्त्र साधना गरेर शिद्धि प्राप्त गरेको आख्यान अहिले पनि चलेकै छ । यिनै सिंहप्रतापले नेवार्नीस“ग बिबाह गरेर अन्तरजातीय सम्बन्ध र सम्पर्क बढाएका थिए । मैजु महारानीका सम्बन्धमा गीत नै बनेको छ– राजमती कूमती, जिके वन पिरती।…..ज्यानमारा, ठग, माफिया, भ्रष्टाचारीले हातभरि तान्त्रिक औंठी लगाएर तन्त्रलाई गंगाधाम नै बनाएका छन् ।
२०५८ साल जेठ १९ गते सबैभन्दा सुरक्षित दरवारमा हत्याकाण्ड भयो । तन्त्रको अदृश्य हतियारको एक्कै प्रयोगमा नेपालका अङ्प्रत्यङ्गलाई क्षतबिक्षत पारियो । यद्यपि यो रहस्य रहस्य नै छ । संहार भैरवको यो संभार लीलाको यथार्थ उजागर गर्न तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालादेखि प्रचण्ड र माधव नेपालसम्मले कुनै प्रयत्न गरेनन् । तत्कालीन राजा वीरेन्द्र, रानी ऐश्वर्य, अधिराजकुमार निराजन, अधिराजकुमारी श्रृती, शान्ति सिंह, शारदा शाह, जयन्ती शाह, कुमार खड्गविक्रम शाही, धीरेन्द्र शाह र युवराज दीपेन्द्र यो हत्याकाण्डमा बली चढे । यो हत्याकाण्डका नायक युवराज दीपेन्द्रलाई बनाइयो, कारण बनिन् राप्रपा अध्यक्ष पशुपतिशमशेर राणाकी छोरी देबयानी । बडामहारानी देवयानीलाई बुहारी बनाउन नचाहने, राजा केही नबोल्ने र युवराज दीपेन्द्र र देवयानीवीचको गाडा प्रेम सार्वजनिक भए पनि दरवार हत्याकाण्डपछि सम्पूर्ण जिम्मेवार अधिराजकुमार ज्ञानेन्द्रको टाउकोमा थोपरियो । हत्याकाण्डलाई ग्य्राण्ड डिजाइन भन्ने कोइराला बिते, अरु चुपचाप छन्, यो रहस्य कहिलेसम्म रहने ? अर्थात्, दरवार हत्याकाण्डले वीरेन्द्र बंश बिनास ग-यो, अधिराजकुमार ज्ञानेन्द्रलाई गद्दीमा बसाल्यो र राजतन्त्रको अन्त्यको कारण बनाइयो । यो हत्याकाण्डले राजतन्त्रको मात्र हत्या गरेन, नेपालीत्वको हत्या ग-यो, अस्तित्वको हत्या ग-यो, जाति–भाषा–क्षेत्रगत एकताको हत्या ग-यो । सुरक्षा, नागरिकता, संस्कार, धर्म र राष्ट्रियताको हत्या ग-यो । अब नेपालको झण्डाको हत्या गर्ने तैयारी सुरु भइसकेको छ ।
हुन त माओवादी दलका अध्यक्ष प्रचण्डले राष्ट्रवादी भएकै कारण राजा वीरेन्द्रको हत्या गरियो भनेर बारम्बार भन्नुभएको छ । सत्तामा हुँदा दरवार हत्याकाण्ड छानबिन गराउने कुरा गर्नु भएको पनि हो । तथापि प्रश्न जारी छ– के यो हत्याकाण्डमा तन्त्र हावी थिएन रु थिएन भने हत्याकाण्डअघि भारतबाट आएका तन्त्रसाधकहरुले रात–रातभर हाँडीगाउँको एक सम्भ्रान्त परिवारको बुइगलमा बसेर तन्त्र साधना किन गरे रु ग्वालिएरकी चेलीलाई हतियार बनाएर किन भारतीय तान्त्रिकहरु प्रयोग गरिए रु के दरवार हत्याकाण्डमा ‘र’को हात छैन रु कतै तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला तन्त्रकै बलमा प्रयोग त भएनन् रु हत्याकाण्डपछि ज्ञानेन्द्रलाई गद्दीमा राख्ने पनि गिरिजा र २०६४ साल जेठ १५ गते राजतन्त्र समाप्त पार्ने पनि गिरिजा रु यो कस्तो आफै बोक्सी, आफै झाँक्रीको भूमिका रु नेपालको सामरिक महत्व र भारतको हातबाट खुस्कदै गएको लगाम कस्न तन्त्रअस्त्र प्रयोग गरिएको अड्कल धेरैको छ । भारतकी चेलीलाई नेपालको बडामहारानी बनाउने साजिस पनि थियो यो । प्रश्न अनेक छन्, भारतको बशिकरणमा परेको नेपाली राजनीति मौन छ ।
दरवार हत्याकाण्डका सम्बन्धमा धेरै यक्ष प्रश्नहरु छन्, जुन अनुत्तरित छन् । इतिहासअनुसार स्त्री हठलाई संयमित पार्न नसक्नेहरु दण्डित भएका छन् । स्त्री प्रकृति हो, पूर्ण शक्ति । जसरी भगवान शिवजीले कालीलाई पाइतालाले कुल्चँदा कालीको जिब्रो टोकेको कलाकृति देखिन्छ, यथार्थमा त्यो शक्तिको मिलन हो, सिर्जनाको पूर्ण शक्ति । यो प्राकृतिक माध्यमलाई जीवनमा उतार्न नसक्नु पुरुषको कमजोरी हो । भगवान कृष्णले स्त्रीलाई त्यस्तो गहिराईको रुपमा चित्रित गर्दै जसलाई अजमाउनु असम्भव बताउनु भएको छ । स्त्रीप्रति सम्मान र मोह वास्तविकता हो, जसले आत्मसमर्पण गर्छ त्यो मूर्ख हो भन्दै स्त्रीलाई सम्मानित गर, माया देउ, विश्वास देउ तर आत्मा नदेउ भनिन्छ । प्रकृतिलाई अरेबियन घोडा बन्न दिनु हुन्न । यही प्रसङ्लाई शेक्सपियरले किङ् डङ्कनको हत्यामा म्यागबेथलाई सु-र्याउने लेडी म्यागबेथको चरित्रका रुपमा प्रस्तुत गरेका छन् । स्त्रीजाति टाढा देख्छन्, बुद्धी तीक्ष्ण हुन्छ र भावनात्मक पनि हुन्छन् । जब पुरुषलाई ङ्याक्न थाल्छन्, अर्दली बनाउँछन् । सम्भबतः रानी ऐश्वर्यको स्त्री हठबाट पराजीत राजा वीरेन्द्र घीउलाटो बने, निर्णय गर्न सकेनन् । शक्तिको केन्द्र रानी बनिन्, दरवार हत्याकाण्डको आधारभूमि निर्माण भयो । शिवाजीले अब्जल खानलाई बाग्न्याक काँडे पञ्जा हानेको वर्णन कम रोचक छैन । महाराज रत्नसेनले पुरोहित राघब पण्डितलाई पूर्णिमा कहिले भनेर सोध्दा झुलुक्क पद्मिनी देखेका पण्डितले इन्द्रजाल गरेर आजै हो भनिदिए । हुन पनि महारानी
पद्मिनी पूर्ण चन्द्रमाजस्तै उज्याली, बिछट्टकी सुन्दरी थिइन । वास्तवमा पूर्णिमा भोलिपल्ट रहेछ । यो थाहा पाएका महाराजले राघव पण्डितलाई कालोमोसो दले, गधामा सवार गराएर देश निकाला गरिदिए । अपमानित राघब पण्डित कसरी बदला लिने भनेर जङ्गलमा भड्किरहेको बेलामा अलादिन खिल्जी सिकार खेल्न त्यही जङ्गलमा पुगे । राघव पण्डितले मन्त्रमुग्ध पार्ने तान्त्रिक श्वरमा बासुरी बजाएर खिल्जीको ध्यान आफूतिर खिचे । अनि उनले खिल्जीलाई चित्तौढको रत्नसेनको दरवारमा सुन्दरी पद्मिनी छिन्, संसारमा त्यति सुन्दरी कोही पनि छैन, देख्यौ भने तिमी त्यही मुर्छा पर्छौ भनेर खिल्जीको मनमा मोह उत्पन्न गराइदिए ।
त्यस्ती सुन्दरी त मेरो दरवारमा हुनुपर्ने भन्ने प्रणयमोहमा परेका खिल्जीले चित्तौढ कुच गरे । घोडाको टापले उडाएको धूलोले ३ दिनसम्म सूर्यलाईसमेत छेकेको वर्णन छ । रत्नसेनका सामु पुगेर खिल्जीले भाइचारा र मित्रता गर्न आएको बखान गरे । रानी पद्मिनीको दर्शन गर्ने इच्छा जाहेर गरे । रानी पद्मिनीले महाराज रत्नसेनस“ग मलाई यसका सामु नदेखाउ, यसको नियत खराव छ भन्दा पनि महाराजले मानेनन् । बाध्य भएर महारानी पद्मिनीले ठूलो ऐनामार्फत आफ्नो अनुहार देखाएर दर्शन गरिन् । महारानी पद्मिनीको मुहार देखेका खिल्जी मदहोस भए, उनको सुन्दरता देखेर उनीभित्र तीब्र कामवासनाको आकांक्षा उठ्यो । त्यसपछि खिल्जीले महाराजस“ग महारानी पद्मिनी प्राप्त गर्ने लालसा प्रकट गरे । महाराज रिसाए, खिल्जीले महाराजलाई कव्जा गरेर पद्मिनीको हरण गर्न खोजे । पद्मिनीले पुरोहितमाथि विश्वास नगर्नु, प्रलोभनमा पारेर समाजको शोषण गर्छन् भन्ने सराप दिइन् र दरवारका सारा महिलाले जवाहर ९सती० जान धमाधम आगोमा हाम फालेर प्राण त्याग गरे । आइमाईको सुन्दरता पनि विनासकारी हुन्छ भन्ने यही इतिहासझैं भयो नेपालको दरवार हत्याकाण्ड । युवराज दीपेन्द्र र देवयानीको प्रेम अन्ततः दरवार हत्याकाण्डको बिध्वंश बन्नपुग्यो । नेपालको शासनव्यवस्थामा कायापलटमात्र भएन, निरन्तरता टक्क रोकियो, इतिहासको नया“ परिच्छेद सुरु हुनगयो । यो घटनामा थप रहस्य भए पछि थाहा होला ।
हेलेन अफ ट्रवाई– विश्व सुन्दरीको जीवन पनि रक्तपातपूर्ण रह्यो । राजकुमार प्यारिसले मेन्नेलियस, ग्रीसकी हेलेनलाई ट्रवाईमा भगाएर ल्याएका थिए । यो घटनालाई भविष्यवक्ताहरुले बर्बादीको किटाणु भित्रियो भनेका थिए । हेलेनको सुन्दरताले ट्रवाई भग्नाबशेष हुने भयो भनिएको थियो । नभन्दै महाभारतमा गान्धारीले पुत्र दुर्योधनलाई नाङ्गै आउन भनेकोमा जाँघ छोपेर जानाले उसको मृत्युको कारण त्यही जाँघ बन्न पुगेझैं १४ वर्षको लडाईंपछि होली रिभरमा आमाले सानैमा नुहाईदिंदा आमाको हातले समातेको ठाउँ कुर्कुच्चामा तीर लागेर छोरो अकेलियज मारिए, उनको लाश सहरमा घुमाइयो, अनेक षडयन्त्रहरु भयो । ट्रवाय बर्बाद नगरी बन्नपुग्यो । ट्रवाईको सर्बनाशको कारण सुन्दरी हेलेन बन्न पुगिन् । मदहोस पुरुषले प्यारिसका सारा सन्तान मारेर हेलेनलाई ग्रीस फिर्ता लिएर गए । यस्तै इतिहास छ आम्रपालीको सुन्दरता र अनगिन्ति नरहत्याको । मगध सम्राट अजात शत्रु आम्रपालीको सुन्दरतामा मन्त्रमुग्ध भए । उनले आम्रपालीलाई पाउन लाशैलाशको बिस्कुन सुकाइदिए । आम्रपालीको अगाडि उभिएर वीर अजात शत्रुले तिमीलाई पाउन मैले सबै पर्खालहरु भत्काएर आएकोछु भनेपछि आम्रपालीले भनिन्– तिम्रो पुरुषत्वप्रति धिक्कार छ । म एउटी नर्तकीलाई प्राप्त गर्न यत्रो बिनास ग-यौ, तिमीप्रति म प्रेम गर्न सक्दिन भनेर बुद्धको शरणमा पुगिन्, भिक्षुणी बनिन् । आम्रपालीको घृणा सहन गर्न नसकेर अजात शत्रु घोडाबाट उत्रिए अनि आफ्नो त रवार आफैले भाँचेर भड्किएको मनलाई शान्तिको खोजमा लगाए । त्यसपछि लिच्छवीहरु गंगाउत्तरबाट नेपाल भित्रिएर लिच्छवी राज्य बनाएका हुन् । बैशालीको लिच्छवी शासन गणतन्त्रवादी–ब्रात्य शासन थियो, बृञ्जिसंघको पतनपछि पाटलीपुत्र सभ्यता किरात, लिच्छवी, मल्ल र शाह शासनमा रुपान्तरित हुँदै आज गणतन्त्रमय बन्न पुगेको छ ।
नेपालको दरवार हत्याकाण्डमा पनि मदहोस युवराज दीपेन्द्र र वीरेन्द्र बंशविनास लीला छ । देवयानीको सुन्दरतामा युवराज दीपेन्द्र अफिमको नशामा झैं लठ्ठिएका थिए । भारतको चाल र दरवार हत्याकाण्डका बारेमा देवयानीका पिता नाती जर्नेल पशुपतिशमशेर जबरालाई थाहा थियो तर उनले राजालाई सुइकोसम्म नदिएर चन्द्र र जुद्धशमशेरको पारिवारिक झगडाको रिस फेरेको विश्वास गरिन्छ । पशुपतिशमशेर चन्द्रका खलक थिए, जसलाई राजदरवारमा छोइछिटो गरिने पुरानै परम्परा थियो । बडामहारानी जुद्धका खलकमा पर्थिन् । हत्याकाण्डपछि पशुपतिपुत्री देवयानी भारतका कुनै राजपुतस“ग घरजम गरेर बसेकी छिन् । दुई सय पचास वर्ष पुरानो राज खानदान समाप्त हुनपुग्यो । राजतन्त्रको अन्त्य नै गरियो । प्रेम स्वर्ग हो, विवेकहीन प्रेम नर्क हो । भनिन्छ, सौन्दर्यमा मदहोस हुनु बिध्वंश हो । बमको आविस्कार दिमागबाट भयो । भावनामा चल्ने हृदय, भौतिक माध्यम शरीर र चेतनामा चल्ने मष्तिष्क भए पनि सबैभन्दा शक्तिशाली दिमाग नै हो । दिमागको इच्छाशक्तिमा सबै निर्भर छ । यस्तो दिमागलाई समेत बशमा पारेर निर्देशित गर्नसक्ने तन्त्र आणविक शक्तिभन्दा बिध्वंशकारी अस्त्र हो । जुन अस्त्र नेपाली जनजीवनको अभिन्न अङ्गका रुपमा छाएको छ ।
खासगरी राणाका दरवारभित्र आज पनि जिब्रो टोकेर दरवार हत्याकाण्ड घटाउन सफल भारतीय तान्त्रिकहरुको चर्चा सुन्न सकिन्छ । चन्द्रका खलक देवयानीलाई कुनै हालतमा पनि बुहारी नबनाउने तत्कालीन बडामहारानी ऐश्वर्यको नारी हठ र उनको तान्त्रिक तरकिवका बशमा परेका सोझा राजा वीरेन्द्रलगायतका नातेदारहरु अनाहकमा मारिए । दरवार हत्याकाण्डका दिन युवराज दीपेन्द्र तिनै तान्त्रिकलाई भेटेर दरवार फर्किएका र बशीकरणका सिकार बनेका दीपेन्द्रले दरवार हत्याकाण्डको ताण्डव नृत्य गरेका हुन् । यद्यपि युवराज दीपेन्द्रलाई वालाजुमा थुनेर राखेको र दीपेन्द्रको मुखुण्डो लगाएर गएका रसियन कमाण्डोले दरवार हत्याकाण्ड गरेर फर्किएपछि युवराज दीपेन्द्रलाई मारेर दरवारभित्र फेकिएको र हत्याराहरु सोही राती ‘स्टैण्डवाई’ राखिएको हवाईजहाजबाट दिल्लीतिर लापता भएका सम्मका अनगिन्ति पानी तरङ्गहरु फैलाईए । हत्याकाण्डका दिन दरवारमा दुईवटा दीपेन्द्र देखिएको चर्चा पनि जारी नै छ । मुमाबडामहारानी रत्नको भूमिकाबारे पनि अनेकन चर्चाहरु फैलिएका छन् । तथापि ज्यू“दा चस्मदिद गवाहले पनि मानेको सत्य के हो भने युवराजलाई टुनामुना र तन्त्र साधकबाट एकोहो¥याइएकै हो र तिनै युवराजले आमा, बाबु, काका, फुपू कोही पनि बाँकी राखेनन् । नेपाल–भारत तन्त्रमन्त्रको देश हो र तन्त्र साधकलाई उपयोग गरेर नेपालभित्र कालो अभिष्ठ राख्नेहरुले नेपालको इतिहास निर्माताको एउटा लामो कालखण्डको जरासमेत उखेलेर फेकिदिए । जसको परिणतिमा विश्वका २६ राजतन्त्र भएका मुलुकबाट नेपालको राजतन्त्रको समाप्तिस“गै राजतन्त्र भएका मुलुक २५ मा झरेको छ । जय काली, जय गोरखालीको नाराले निर्माण गरेको अविभाज्य नेपाल राजतन्त्रको अन्त्यपछि जातीय बिखण्डनको कृष्णभीरबाट गुल्टिने अवस्थामा पुगेको छ । भनिन्छ, तन्त्र साधकहरुको अन्त्य बडो दयालाग्दो हुने गर्छ । कालतन्त्र गर्नेहरुको जीवन नै अपराध कुण्ड बनिसक्ने हुनाले उनीहरुको मनुष्य चोला, शरीर यति तिरस्कृत र दुर्गन्धमय हुन्छ, तिनको अन्त्य भयलाग्दो र दयालाग्दो गरी हुन्छ । काठमाडौं नारायण चौरतिरका एक राणा तान्त्रिक पानी बौलाह बनेर मर्न पुगे भने कति तन्त्रविदहरु आफ्नो दिशापिसाव आफैले खाएर र साह्रै दुःख पाएर मरेका उदाहरण अनेकौं छन् । तर स्वेततन्त्रका साधकहरुको जीवन भने स“धै सफल रहेको तन्त्रका ज्ञाताहरु बताउँछन् ।
नेपालको तन्त्रमन्त्रको रहस्य पत्ता लगाउन जर्मनी र रसियनहरु कस्सिएका छन् । रसियनहरु कमै चर्चामा छन् तर जर्मनीहरु राजधानीको फोहर सफा गर्ने नाममा, काठमाडौं, भक्तपुर र पाटन ‘दरवार स्क्वाएर’ सफा गर्ने, पुननिर्माण गर्ने नाममा तन्त्रमन्त्रको अनुसन्धानमा डुब्ने गरेका छन् । पाटनको कृष्ण मन्दिर मुनी के होला रु भनेर जर्मनीले पुननिर्माणमा सघाएर व्यापक अनुसन्धान गरेका थिए । आज पनि लामा, राई, तामाङ् मन्त्र सिक्न र लामा तन्त्र शिक्षा आर्जनका लागि वर्षको दुई हजारभन्दा बढी जर्मनीहरु नेपाल आउने गरेका छन् । हामी आधुनिकतालाई अंगालेर पुरातनलाई फेक्दै र बिसर्जन गर्दै गइरहेका छौं, जर्मनीहरु पुरातनताभित्र के छ भनेर खोतल्दै र संकलन गर्दै गइरहेका छन् । जर्मनी कानुनले धामीझा“क्री अध्ययनलाई मान्यता र महत्व नै दिएको छ । पूर्वीय दर्शनका हामीहरु अग्रगमनको नारा लगाइरहेका छौं, युरोपियन मूल पूर्वीय दर्शनभित्र बिचरण गर्न थालेका छन् । २०६६ साल फागुनमा कतारको दोहा म्यूजियममा नेपालको श्रीपेचको प्रदर्शन गरियो । यो श्रीपेचमा प्वा“ख, हीरामोती जडान भएको छ । वेभसाइट सूचनाअनुसार १८८० मा बनेको यो श्रीपेच कतारले पश्चिमा मुलुकबाट किनेर ल्याएको हो । कुनै शाही सदश्यले बेचेको हुनसक्छ भनिएको छ । श्रीपेचमाथि पनि अध्ययन सुरु भएको छ । हामी सभ्यता र संस्कृति मासिरहेका छौं, सभ्यहरु पृथ्वीदेखि चन्द्रमासम्मका सभ्यता अनुसन्धान गरिरहेका छन् । त्यसैले नेपाललाई बौद्धिक बन्दकीमा परेको मुलुक भन्नेहरुको संख्या दिनदिनै बढ्दै गएको छ ।
युरोपियन राष्ट्रका एक विद्वत टोलीले नेपालमा काग पूजा, कुकुर पूजा, गाई पूजा, शालिग्राम पूजा र बोक्सीका बारेमा अनुसन्धान गर्न थालेका छन् । उनीहरु हनुमान ढोकामा नाइटो किन गाडिन्छ, किलागलमा किन पैसालाई किला ठोकिन्छ, मन्दिर र जात्रामा तन्त्रपूजा किन गरिन्छ भन्नेसम्मका विषयमा अध्ययन गरिरहेका छन् । हाम्रा समाजशास्त्री र सरकारलाई यसबारे अत्तोपत्तो छैन । राजनीति जिब्रोको स्वाद लिने मेवाशास्त्रमा सिमित भएपछि श्रीखण्डको रुख खुर्पाको बिड नबने के बन्छ रु हाम्रा ठूला दलहरुमध्ये कांग्रेसलाई बनारसीदास गुलाबचन्दको समाजबाद थाहा छ, माओवादीलाई माओको रातो किताव र टेक्टिस कण्ठ छ, एमाले मदन भण्डारीको जनताको बहुदलीय जनबादमा हराइरहेको छ । हिजो रुसमा पानी पर्दा नेपालमा छाता ओढिन्छ भनिन्थ्यो, आज दिल्लीमा पानी पर्दा नेताहरुलाई रुघा लाग्न थालेको छ । महात्मा गान्धीको तस्वीरमुनी भारतीय राजदूत राकेस सुदस“ग बस्न पाए गौरव गर्नेहरुका लागि राष्ट्रिय महत्व पानीभन्दा पातलो छ । भारतले कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई ‘अथन्टिक लिडर अफ नेपाल’ भनेर सुम्सुम्याएर १९९० को सम्झौतामा सही गरायो, त्यही भारतले गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई ‘एसियाका राजनेता’ भनेर फुलाएर टनकपुरको ५७७ मिटर नेपाली भूभाग हडप्यो, देउवा र माधव नेपाललाई प्रधानमन्त्री र उपप्रधानमन्त्री बनाएर महाकाली सन्धि संसदबाटै पास गरायो, त्यही भारत हो– प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउने अवशर देखाएर गिरिजा सरकार हु“दा ३० लाख भारतीयलाई नेपाली नागरिक बनाउन सफल भयो । कम्युनिष्टहरु पृथ्वीनारायण शाहलाई खुनी हमलावर, बिस्तारवादी भनिरहेका छन् र भारतमा जन्मेका र भारतको नून र गुढ खाएका नेपालका नेताहरु यी सब झाडा–बान्ताहरु पचाइरहेका छन् । धर्मभक्त माथेमा, गंगालाल श्रेष्ठ, शुक्रराज शास्त्री, दशरथ चन्द चार सहिद थिए, प्रचण्ड सरकारले ७६३५ र माधव सरकारले थप १६ सहिद घोषणा गरिसके, सहिद बढ्ने क्रम रोकिएको छैन । सहिद धेरै भएर देश बलियो बन्ने होइन रहेछ भन्ने प्रमाण नेपाल हो । देशबाट निकालिएका चन्द्रशेखर र अंग्रेजको लोभमा फसेका बनारसी गजराजले टिस्टा–का“गडाको नेपाललाई मेची–महाकालीमा सिमित गरिदिए, १२ बुँदे दिल्ली सम्झौतामा झुकेका प्रचण्ड र दिल्लीका हनुमान बनेका स्व। गिरिजाप्रसाद कोइराला र माधवकुमार नेपालले नेपाललाई मात्र खुम्च्याएनन्, नेपालीत्वको ढुकढुकीमात्र बा“की राखिदिएका छन् । त्यसैले महान देश, महान जनताका निकम्मा नेता र तिनको नेतृत्वका बारेमा जनताले किटान गर्नुपर्ने स्थिति आएको छ । बिदेशपरस्त राजनीतिक ग्या“स चेम्बरमा आम जनता निसास्सिएर बा“चिरहेका छन्, कुनै नेतालाई असजिलो हु“दैन । यिनको राष्ट्रबादिताको परिचय यही हो । बैदिक तन्त्रमय नेपाल र नेपाल हा“क्ने संविधानसभाका २५ दल राजनीति र कूटनीति बिधाको बिदेशीतन्त्र र जदौ मन्त्रमा बशिभूत भइसकेका छन् । यो अवस्थामा विद्वान डा। बाबुराम भट्टराईको आगामी १० वर्ष माओवादी प्रमुख शक्ति भएर रहन्छ भन्ने दावीमा मेरो आपत्ति छ– आगामी १० वर्ष नेपाल नेपाल भएर त रहन्छ ? पञ्चतन्त्र थियो, पञ्चायततन्त्र आयो । प्रजातन्त्र थियो, लोकतन्त्र आयो । तन्त्रमन्त्र थियो, नेतातन्त्र आयो । जनविद्रोहको साधना हुँदैछ, भो पुग्यो नरहत्या काण्ड, धेरै बग्यो मान्छेको रगत, अव त शान्तितन्त्र सुरुहोस् । दरवार हत्याकाण्डमा बली चढेका अँस्थाहरुको आत्मालाई शान्ति मिलोस् ।
बन्द हड्ताल नगर्ने प्रतिबद्धता
प्रजातन्त्र विना पत्रकारिता अर्थहिन हुन्छ